6 Koorsooyinka Naadiga Gaarka ah ee PGA & Koorsooyinka Golf | Sida loo Codsado 2022
6 Koorsooyinka Naadiga Gaarka ah ee PGA & Koorsooyinka Golf | Sida loo Codsado
Ma waxaad raadineysaa meel qabow oo lagu nasto oo lagu raaxeysto? Guryaha naadiga ah ee gaarka loo leeyahay ee PGA iyo koorsooyinka golf-ku waxay noqon karaan meel ku habboon. Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa gurigan naadiga ah ee gaarka loo leeyahay, koorsooyinkiisa golf-ka ee gaarka ah, iyo sababta ay dunidu uga hadlayso.
Guryaha naadiga ah ee gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'PGA West' iyo koorsooyinka golf-ka ayaa ah koorsooyin golf 6 ah oo ku yaal La Quinta, California, Mareykanka. Hantidu waxay ku fadhidaa dhul 2,000-hektar leh oo leh 109 godad ah oo la ciyaaray tan iyo 80s. PGA West waa naadiga kaliya ee gaarka loo leeyahay aduunka oo leh laba koorso golf oo kuxiran joornaalka Golf Magazine ee 100 koorsooyinka ugu waawayn aduunka.
Koorsooyinka gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'PGA West' iyo naadiyada golf-ka waxaa ku wareegsan muuqaalka farshaxanka ee Santa Rosa, koorsooyinka horyaalnimada waxaa booqda dad caan ah, dad badan oo PGA Tour Pros ah, iyo madaxweynayaal dhammaantood ku riyaaqay goobta dalxiiska iyo naadiyada.
Waxa kale oo jira naadi sifiican u qalabeysan oo jimicsi, oo ku dhameystiran tennis, Pickleball, iyo maxkamada isboortiga.
Waa maxay koorsada ugu wanaagsan ee PGA West?
Immisa koorso ayaa ku jira PGA West?
Waa imisa xubinnimada PGA West?
Lixda Koorsada Golf Galbeed ee PGA
Koorsada Gaarka ah ee Arnold Palmer
Koorsada Dalxiiska ee Greg Norman
Koorsada Gaarka ah ee Jack Nicklaus
Koorsada Dalxiis ee Jack Nicklaus Tournament Resort
Koorsada Gaarka ah ee Tom Weiskopf
Koorsada Dalxiis ee Garoonka
Sida Loo Dalbo Kulliyadaha Gawaarida Gaarka ah ee PGA iyo Koorsooyinka Golf
Koorsada ugu wanaagsan ee PGA West waa koorsada garoonka
PGA Westhouse clubhouse-ka gaarka loo leeyahay iyo koorsooyinka golf-ka waxay leeyihiin 6 koorsooyin golf ah oo kala ah;
Koorsada gaarka loo leeyahay ee Arnold Palmer
Koorsada loo dalxiis tago ee Greg Norman
Jack Nicklaus koorso gaar ah
Koorsada dalxiiska Nicklaus Tournament
Tom Weiskopf koorso gaar ah
Koorsada loo dalxiis tago ee Stadium
Kharashka xubinnimada ee PGA West ee naadiyada gaarka loo leeyahay iyo koorsooyinka golf-ka waxay ku kala duwan yihiin nooca xubinnimada ugu horreysa, fiiri jadwalka hoose si loo caddeeyo:
Nooca Xubinnimada Premier Lacagta xubinimada
Champions $ 10,000
cayaaraha $ 20,000
golf $ 45,000
Golf lamadegaanka $ 45,000
Khidmadaha xubinnimada lama soo celin karo oo mudnaan ayaa la siiyaa xubnaha, xaasaska, iyo carruurta ka yar 25 sano.
Koorsada gaarka loo leeyahay ee Arnold Palmer waa mid ka mid ah lixda PGA West ee naadiyada gaarka loo leeyahay iyo koorsooyinka golf-ka ee uu naqshadeeyay Arnold Palmer - Hool caan ku ah kubbadda dahabka. Waxay leedahay dherer 6,950 yaard ah oo leh 5 godad dhammaystiran oo lagu xardhay buuraha Santa Rosa.
Koorsadan golf-ka ee PGA west waxaa naqshadeeyay Greg Norman waana koorsada cusub ee loogu talagalay PGA West oo inta badan lagu tilmaamo inay tahay "mid dhib badan laakiin cadaalad ah". Dhererka koorsadu waa 7,200 yaard oo leh 9 god oo fadhiya 68 hektar oo dhul ah.
Koorsadu waxay dul taal sariir badeed hore oo 40-fuudh ka hooseysa heerka badda, qaabkeeda isku dhafan waxay caqabad ku tahay ciyaartoyda heerarka oo dhan waxayna sidoo kale bixisaa waayo-aragnimo dhab ah "dibedda" oo kugu soo sasabi doonta adiga waqti iyo waqti.
Koorsadan golf-ka waxaa naqshadeeyay Jack Nicklaus oo mar ka mid noqday Koorsooyinka 100 ee ugu sarreeya Adduunka, waxaa loogu talagalay inuu kaa qaado xasilloonida nabadeed iyo imtixaanka adag laga bilaabo bilow ilaa dhammaad. Waxay leedahay dherer 6,951 yaard ah waxayna leedahay istaroogga ugu sarreeya iyo foorarka 74.3 iyo 146 siday u kala horreeyaan iyadoo la adeegsanayo qiimeynta saddexda koorso ee gaarka loo leeyahay ee GPA West.
Kani waa naqshad kale oo uu sameeyay Jack Nicklaus waana mid ka mid ah naadiyada gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'PGA West clubhouse and golf courses', waa 7,204 yaard oo dhiigbax ah iyo qiime jaban oo ah 75.3 iyo 143 siday u kala horreeyaan. Tartanka Nicklaus oo ay weheliso Koorsada Istadiyaalku waa martigaliyaha laba-sanadlaha ah ee PGA Tour wareega ugu dambeeya ee Q-School, oo ay ka soo qayb galaan qaar ka mid ah ciyaartoyda adduunka ugu fiican.
Koorsada Gaarka ah ee loo yaqaan 'Tom Weiskopf Course' sidoo kale waa mid ka mid ah naadiyada gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'PGA West clubhouse' iyo koorsooyinka golf-ka ee la furay 1996 oo ah kooxdii ugu dambeysay ee naadiga. Koorsadu waxay bixisaa aragti dusha sare ee dooxada wixii ka dambeeya dhammaystir dhamaystirka 'trifecta' ee ciyaarta gaarka loo leeyahay ee xubnaha iyo martida.
Koorsada gaarka loo leeyahay waa 7,164 yaard oo dherer ah oo sagaal bannaanka loo banneeyey iyo sagaal gudaha waddooyin deeqsinimo leh iyo cagaar ballaadhan oo soo dhaweyn leh.
Koorsada 'Resort Resort Course' ayaa ka mid ah koorsooyinka 100 ee ugu sarreeya ee ay ku ciyaaraan joornaalada Golf iyo 4-tath koorsada ugu adag America ee koorsooyinka ugu adag 50 ee Golf Digest America. Waa dherer 7,300 yaard ah wuxuuna leeyahay istaroogga ugu sareeya oo ah 76.1 wuxuuna udhacaa qiimeynta 150 ee dhammaan koorsooyinka PGA West ee naadiyada gaarka loo leeyahay iyo koorsooyinka golf.
Haddii aad xiiseyneyso inaad xubin ka noqoto naadiga PGA West ee naadiyada gaarka loo leeyahay iyo koorsooyinka golf-ka markaa waxaad u baahan tahay inaad dalbato xubinnimada aad doorbideyso. Jadwalka kore wuxuu muujiyey qaybaha xubinnimada iyo khidmadooda, oo aan la soo celin karin, oo looga baahan yahay inaad xubin ka noqoto.
Halkan guji si aad u bilowdo
12-ka Jaamacadood ee ugu Jaban Talyaaniga ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadaha Australiya oo aan lahayn Khidmadaha Codsiga Ardayda Caalamiga ah
Top 15 Jaamacadaha Poland ee Ardayda Caalamiga ah
Liistada Jaamacadaha Online-ka ee Lacag La'aanta ah ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
PGA Westhouse naadi gaar loo leeyahay iyo koorsooyin golf
Previous Post:Kharashka Masters ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
Post Next:15 Deeq waxbarasho oo dhamaystiran oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Yurub